१५ वर्ष लामो बीमा क्षेत्रमा देखिएको मेरो बुझाई:: Artha Dabali
१५ वर्ष लामो बीमा क्षेत्रमा देखिएको मेरो बुझाई
पोषक राज पौडेल, सीईओ, सिटिजन लाईफ ईन्स्योरेन्स
करिब १५ वर्ष मैले जुन अवस्थामा बीमा बजार देखेको थिएँ । अहिले पूर्ण रुपमा भिन्न छ । बीमा क्षेत्रको दायरा विकास र यसले बनाएको परिचय पनि धेरै फरक छ । जुन अविधिमा मेट लाइफ इन्स्योरेन्स, नेपाल लाइफ र एलआइसी कम्पनीहरु थिए । मानिसहरुको धराणा बुझाई निकै कम थियो । कम्पनीको वृद्धिसँगै बीमा शिक्षा सचेतनाको पनि विकास र विस्तार हुदै आएको छ । अहिले अवलोकन गरेर हेर्दा बीमा क्षेत्रमा भविष्य राम्रो छ ।
एजेन्टहरु तालिम लिएर फुल टाइम यसैमा निर्भर रहन सक्छन् हिजो पार्ट टाइमा मात्र गरेको देखिन्थ्यो । कम्पनीहरु पनि नयाँ नयाँ प्रडक्ट तथा सम्भावनाको खोजीमा छन् । बजारमा प्रतिस्पर्धा सिर्जना भएको छ । यसले बीमा बजारलाई अगाडि बढाउन सहयोग पुर्याउँछ भन्ने लाग्छ । नीतिगत रुपमा पनि पछिल्लो समय धेरै सुधार आएको छ । बुँदागत रुपमा बीमाबारे यस्ता छन् :
–अहिलेसम्म नेपालमा अभिकर्ताहरुले कम्पनीहरुमा काम गर्न पाउने व्यवस्था छ । कम्पनीले आफ्नो हिसाबले उनीहरुको क्षमता विकास गरेर लगिरहेका छन् । तर, अझै व्यवसायिक रुपमा विकास गर्नुपर्ने र उनीहरुलाई ग्राहकप्रतिको विश्वास र डेलिभरीमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
–ग्राहकहरुले सेवा सुविधाप्रति राखेको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
–पहिले अभिकर्ता साथीहरुले आफूले चिनेको आफन्त तथा साथी सर्कलका व्यक्तिहरुको बीमा गराउने गर्दथे । त्यतिबेला आवश्यकता भन्दा पनि अनुरोध तथा घनिष्टताको आधारमा बीमा गर्ने गर्दथे । नागरिकलाई बीमाको बारेमा बुझाउन, कन्भिन्स गर्न केही प्रडक्टहरु मात्र थिए । निश्चित समयपछि यति रकम फिर्ता पाइन्छ भन्ने हिसाबले त्यतिबेलाको समयमा बीमा गरिन्थ्यो भने अहिले जोखिम केन्द्रीत बीमाका प्रोडक्टहरु रहेका छन् । यता भुकम्पपछि मानिसहरुले बीमालाई म नहुँदा के हुन्छ ? भन्ने हिसाबले बुझ्न थालेका छन् ।
–पारिवारिक संरचना पनि पहिलेको तुलनामा परिवर्तन भएको छ । पहिले ८० प्रतिशत नागरिक कृषिमा आधारित थिए भने अहिले त्यो घट्दो छ बीमा प्रति जानकार पनि छन् ।
–सोसियल मिडियाले पनि बीमाबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलको छ ।
कम्पनीहरु लघुबीमा अन्र्तगत माइक्रो फाइनान्स, सहकारी र बैंकहरुमार्फत पुगेका छन् । दुर गाउँहरुमा पुग्ने यो सहज उपाय पनि हो ।
–कतिपय नागरिकहरु बुझ्दाबुझ्दै पनि बीमालाई प्राथमिकतामा राखेको पाइदैन । कम्पनीले महत्व बुझाउन सकेमा उनीहरुले बीमा गर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।
–पुँजी भएका व्यापारी वर्गका मानिसहरुका लागि बीमा भन्दा पनि अन्य कुरा प्राथमिकता रहेको पाईन्छ । उनीहरुलाई बीमा हुनै पर्ने अनिवार्य स्थिति हुने हो भने अझै राम्रो हुनेछ ।
–बीमा आवश्यकताको प्रथम प्राथमिकतामा परेन । विकसित देशहरुमा पहिलोपटक तलब बुझेर बीमा किन्ने नियम / प्रचलन छ । यहाँ पनि त्यस्तै हुनु आवश्यक छ ।
–ग्राहकले सोझै कम्पनीमा आएर प्रोडक्टहरु बुझ्न र किन्न पनि सक्छन् । तर, ब्रोकर सिस्टमबाट पनि बीमा बेचिनुपर्दछ । नेपालमा अभ्यास छैन तर निकट भविष्यमा हुन्छ जस्तो लागेको छ । आवश्यकता अनुसार योजना तथा प्रडक्टहरु ल्याउन सके बीमा कम्पनीहरु धेरै अगाडि बढ्न सक्छन्, बजारको भविष्य निकै सुरक्षित रहेको छ ।
अनुभवः विदेशमा सुविधा छ, सुख छैन तर, नेपालमा सुख छ सुविधा छैन
धन ठूलो कि मन ?, डा. उपेन्द्र देवकोटासँगको मेरो तितो यथार्थ